ရထားမသက်ဆိုင်ရာသီအီတလီမှာခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း. သို့သျောလညျး, သူတို့ကဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေ option ကိုဖြစ်သက်သေပြ, အထူးသဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာ. အီတလီမှာဆောင်းရာသီမီးရထားခရီးသွားလာသာဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထိရောက်မယ့်. ဤဆောင်းပါးသည်…
အဆိုပါထိပ်တန်းဘာတွေလဲ 8 အီတလီမှာပီဇာ
ဘယ်အရပ်ဌာနပိုကောင်းကတီထွင်သောတိုင်းပြည်ထက်ပီဇာကိုခံစားဖို့, မှန်သော? အီတလီချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒီအရသာရေစာ-လှည့်-မုန့်ညက်ကိုချစ်! အီတလီမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါပီဇာအနုပညာစင်ကြယ်သောပုံစံသို့လှည့်ကြသည်, နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ယူနက်စကို-အတည်ပြုကြသည်! အီတလီနိုင်ငံန်းကျင်ရုန်းမင်း, you’ll find pizzerias opened in…
သင်တစ်ဦးတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားဖြစ်ကြပြီးသင်တစ်ဦးခြေသလုံးအဖြစ်ခရီးသွားလေ့ကျင့်လိုပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရထားခရီးသှားသငျသညျဥရောပကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမျှတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်ဥရောပကတဆင့်သွားလာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဖြစ်…
ထိပ်တန်း5စပျစ်ရည်ကိုဥရောပခုနှစ်တွင်မြို့နှင့်မည်သို့ရှိပါ Get မှ
တိုင်းစစ်မှန်တဲ့စပျစ်ရည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဥရောပ၌စပျစ်ရည်ကိုမြို့ကြီးများတတ်နိုင်နှင့်အံ့သြဖွယ်သောစပျစ်ရည်ကိုပူဇော်သိတယ်. ပြင်သစ်ကနေအီတလီ, နောက်ထပ်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဝိုင်ရှိသည်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်ဖော်ထုတ်နေကြ. စိတျအပိုငျးမှာတော့, ဤသည်စံပြရာသီဥတုကြီးထွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
တစ်ဦးညင်ညင်သာသာရွေ့လျားရထားပေါ်တွင်အိပ်ပျော်ကျသွားနှင့်သင့်လိုရာခရီးမှာနောက်တစ်နေ့နံနက်နှိုးထက်မပိုကောင်းသောခံစားမှုရှိတယ်, တောင်စောင်းကနေမျှသာမိနစ်. ဥရောပမှာ, ရထားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုအတွက်လုိုအပ်သည်. အဲဒါမဟုတ်ဘူး…
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီပွဲတော်များသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်အအေးရာသီ၏အများဆုံး Make. အဆိုပါပွဲတော်များနှင်းလျှောစီးနှင့်စနိုးဘုတ်စီးခြင်းကနေသီချင်းအရာအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေ, ပြဇါတ်, ရေခဲပန်းပု, နှင့်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပွဲတော်စစ်ရေးပြ. အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်5သငျသညျဥရောပတလွှားဖြစ်ပျက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဘယျသို့၏ roundup…
သင်မပျက်မကွက်ဘဲနေရမည်ထိပ်တန်းဥရောပရထား Tours မှ
ဘယ်နေရာမှာမဆိုခရီးသွားလာအမြဲအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လှပသောမြို့ကြီးများရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လုပ်, ငါတို့ဥစ်စာထဲကနေအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏သမိုင်း. သို့သျောလညျး, သငျသညျအဆင်းလှသောအရပ်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဝေးနေအိမ်ထဲကနေသွားပါရန်မလိုပါ. အနည်းငယ်ဥရောပရထားခရီးစဉ်ရှိပါတယ်…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ဥရောပခရီးသွား
တစ်ဦးအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးအဖြစ်အီတလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းပယ်ခြစ်ရာတစ်ခုခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ. သငျသညျအထပျထအီတလီနိုင်ငံမှပြန်လာနှင့်နေဆဲဒီပါမြေ၏လုံလောက်စွာနှင့်၎င်း၏အရသာကိုပုံမှန်အတိုင်းရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်, မဟုတ်…
အစားအစာကအရမ်းဘုန်းကြီးတယ်, အထူးသဖြင့်အရသာအစားအစာ. ဥရောပတှငျနထေိုငျသငျသညျကဤမျှလောက်အကြောင်းပြချက်ပေးသည်တဲ့အခါမှာဒါဟာနှင့်အတူစွဲလမ်းခံရဖို့ဒါလွယ်ကူပါတယ်! အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဥရောပ၌ရှိကြ၏, ငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာအစားကောင်းကြိုက်သူများများမှာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချ, and so will you…
ဤမျှလောက်များစွာသောမြင့်မားသောပရိုဖိုင်းနှင့်အတူ, ပြင်သစ်နဲ့တူခေတ်စားလာနိုင်ငံများ, ဂျာမနီ, နှင့်ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြီးယားအများကြီးအာရုံစိုက်မှုအဖြစ်လာပြီရသေးအံ့ဩစရာမရှိ! ရလား, အီတလီနိုင်ငံကယ့်ကိုမြေပုံကျွတ်လေ၏ဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့်သြစတြီးယားကနေအီတလီကိုရထားလမ်းကြောင်းသေချာလျစ်လျူရှုထားပြီး. ဒါပေမဲ့, ကြောင်းအကြောင်းဖွင့်…